Ubre - BIM ọkachamara ọkachamara - Geofumadas
A na-eji usoro a eme ihe maka ndị ọrụ nwere mmasị n'ọhịa maka ịwube ihe owuwu, ndị chọrọ ịmụ ngwaọrụ na ụzọ niile. N'otu aka ahụ nye ndị chọrọ imeju ihe ọmụma ha, n'ihi na ha na-ahụkarị sọftụwia ma chọọ ịmụta ịhazi nhazi na mmefu ego na usoro mmemme ya dị iche iche, nkwekọ na ntinye nsonaazụ maka usoro ndị ọzọ.
Mepụta ikike maka ịhazi ihe, ịmegharị na ịtụfu ụdị data ihe owuwu. Usoro a gụnyere mmụta nke Navisworks, otu n'ime mmemme eji eme ihe n'ọhịa nke njikwa BIM; tinyekwara iji ngwa ọrụ eji ozi a na-arụkọ ọrụ na usoro ndị ọzọ dị ka ọrụ Navisworks, Dynamo na Quantity. Tụkwasị na nke a, ọ gụnyere usoro echiche maka ịghọta usoro njikwa akụrụngwa niile n'okpuru usoro BIM, yana usoro Revit Architecture yana iwebata na nkà ihe ọmụma dijitalụ ejima.
Enwere ike iwere ihe nkuzi n’adabereghị, na-anata diplọma maka usoro agụmakwụkwọ ọ bụla manaBIM Ọrụ Ọkachamara Ọkachamara»Na-enyefe naanị mgbe onye ọrụ ewerela usoro ọmụmụ niile na njem.
Uru nke itinye n'ọrụ na ọnụahịa nke Diploma - Ọkachamara Ọrụ BIM
BIM - Mwepụ nke ukwu nke 5D… .. .. USD 130.00 24.99
Arụ ọrụ BIM - Dynamo ………. USD 130.00 24.99
Usoro BIM …………………………. USD 130.00 24.99
Okwu mmalite maka ejima dijitalụ ……. USD 130.00 19.99
BIM 4D- NavisWorks………………. USD 130.00 24.99
Previous Post«Previous Lomalọma - Ndị ọkachamara na-ahụ maka ọrụ obodo
Next Post Diploma - Ọkachamara Ndụ NdụNext »